Waa Kuwee Kalkaaliyaasha Kalkaalisada Maskaxda Ee Ugu Mushaharka Badan | Gobolka Sare 2022
Bogga ugu weyn Waa Kuwee Kalkaaliyaasha Kalkaalisada Maskaxda Ee Ugu Mushaarka Badan? | Dawladaha ugu sarreeya 2022 -ka
Xirfadlayaasha kalkaalisada maskaxda ayaa kaalin weyn ku leh nidaamka daryeelka caafimaadka maskaxda. Caafimaadka maskaxda waxaa lagu sixi karaa daawo iyo teraabiyada cilminafsiga oo u oggolaanaysa bukaanka inuu la sameeyo xiriir isku -dhafan oo la leh dhakhtarka, sidaa darteedna wuxuu bixiyaa macluumaad aad u badan oo loo baahan yahay.
Waqti badan iyo dulqaad ayaa looga baahan yahay maamulka daaweynta caafimaadka dhimirka.
Halkan waxaa ah waayo -aragnimo kooban oo aan la ilaawi karin oo ka mid ah dhakhaatiirta kalkaalisada dhimirka qaarkood oo aysan iloobi karin.
Khibradaha Dhakhaatiirta Kalkaaliyayaasha Maskaxda
“Markii mid ka mid ah bukaannadayda dib loogu soo celiyey xannaanayntii gabdhaheeda mataanaha ah oo laga kaxeeyey isla markii ay dhalatay kadib, waxaannu ka wada shaqaynnay dhammaystirka barnaamijkeeda ay maxkamaddu amartay.
Waxaan sidoo kale ka shaqeynay sidii aan dareen ahaan ugu diyaarin lahayn mas'uuliyadaha ay waalidnimadu ku jirto. Iima ogeysiin markii maxkamaddu ugu dambeyntii carruurta u dhiibtay.
Maalintii iigu dambaysay ee xarunta caafimaadka dhimirka oo aan ka shaqeeyay sidii NP, waxay u keentay labadeeda gabdhood ee mataanaha ah fadhigeena ugu dambeeyay.
Waxay igu filnayd in aan aad ugu faano waxa aan sameeyo, iyo marag -kaca nooca shaqada ay kalkaaliyayaasha maskaxdu qabtaan oo wax ka beddeli kara nolosha dadka kale. ” Marie Rose B. Bhuiyan, RN, BC, MS, NP-P
“Inuu saamayn togan ku yeesho nin aad u nafsiya oo qaba cudurka dhimirka ee xaqiiqada looga baxo, oo dabeecaddiisa dhibku ka kooban tahay marmar markasta oo fikrad“ xun ”ay maankiisa gasho.
Waxa uu garbihiisa ku yeeshay boogo waaweyn, ilaa heer laga fiirsaday tallaal maqaar. Aniga iyo kalkaaliye kale ayaa bixinay daryeelka kalkaalisada asaasiga ah waxaana adeegsanay waxqabadyo badan oo hal abuur leh si aan u helno kalsoonidiisa oo aan u bogsano boogaha.
Markii uu nooga yimid xarumo kale wuxuu maalin walba boqol -jugleyn jiray. Dhamaadkii isbitaal dhigistiisa, wuxuu sameeyay habdhaqankan hal mar ama laba jeer maalintii.
Miisaan buu yeeshay, wuu caafimaad qabay, maskaxiyanna wuu yaraa. Marna uma baahna tallaal maqaar.
Qaar ka mid ah xeeladaha hal-abuurka ah ayaa ka koobnaa barashada sida loola xiriiro habka uu doorbiday ee looga dooday qoob-ka-ciyaarka majaajilada maalinlaha ah, siinta nafaqada halka uu “ka heli doono” waddada dhexdeeda tan iyo markii uu noo sheegay inuu yahay “qof waddo ah”, oo mar kale dhaymo boogihiisa dhowr jeer maalintii, oo ka shaqaynaya wax -ka -jeedinta si aan wax u dhicin.
Isku soo wada duuboo, waayo -aragnimo la yaab leh !! ” Mary Blasi Karls, MSN, RN
WAXYAABAHA LAGA QAADO KU -MEEL GAARKA KAALIYAHA NURSIYADA EE PSYCHIATRIC?
Xirfad kasta, waxaa muhiim ah in la hubiyo in mihnaddu u qalanto ka hor inta aan loo tixgelin inay tahay mid wanaagsan.
Ahaanshaha dhakhtar kalkaaliso maskaxeed waa u qalantaa, macaashka lacageed ee baaxadda leh ayaa ah sabab ku filan maadaama ay daryeeli karto baahiyaha iyo rabitaanka aasaasiga ah. Waxa kale oo ay qofka siinaysaa dareen ah soo -gaadhista dhacdooyinka nolosha.
Waxay siinaysaa boos xorriyad, inta badan kuma shaqaysid kormeerid laakiin waxay la mid tahay inaad ku noolaato nolol caadi ah.
Sidoo kale, inta ay shaqeyneyso, waxay bixisaa dareen ah lahaanshaha xallinta dhibaatooyinka iyada oo loo marayo xirfadaha xallinta mashaakilka. Sidaa darteed, dhisidda xiriiro lala yeesho shaqsiyaadka darajada hoose iyo kuwa darajada sare kaga jira bulshada.
Sidoo kale akhri: Waa Kuwee Ciyaartoyda Isboortiska Lacagaha Ugu Sarreeya Sanadka 2022 | Ciyaaraha ugu Fiican
DOORASHADA SAXAFIYE KAALMEENKA KAALIYAHA PSYCHIATRIC
Dhakhaatiirta kalkaalisada caafimaadka dhimirka ayaa xoogga saara shaqada la xiriirta baaritaanka caafimaadka iyo maskaxda. Waxay fuliyaan mas'uuliyado kala duwan oo ku saleysan aaggooda takhasuska leh ama qodobka bukaanka shaqsiyeed ama meesha ay ka shaqeeyaan. Qaar ka mid ah waajibaadka iyo jirooyinka waxaa ka mid ah:
Qiimaynta caafimaadka maskaxda
Niyad jabka dhalmada kadib
XAGGEE AY KA SHAQEEYAAN DHAQANGALAYAASHA KALKAALIYADDA NUURKA?
Xirfadlayaal kalkaaliso maskaxeed ayaa looga baahan yahay ku dhawaad ​​urur kasta sababtoo ah saamaynta sii kordheysa ee dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee adduunka. Caafimaadka elektaroonigga ah iyo telemedicine-ka ayaa ka dhigay shaqada mid dabacsan dhakhaatiirta kalkaaliyaha maskaxda.
Waxay ka shaqeeyaan meelo khaas ah sida:
Xarumaha bukaan jiifka
Dhaqannada caafimaadka dhimirka ee gaarka loo leeyahay
Barnaamijyada xadgudubka maandooriyaha
SIDA LOO NOQON KARO KU -SAMEEYE KAALIYAHA XANUUNKA PSYCHIATRIC
Xirfad kasta waxay leedahay waddo xirfadeed, waxaa muhiim ah in la ogaado tallaabooyinka waxbarasho iyo shahaado ee kugu hagaya inaad noqoto dhakhtar kalkaaliye caafimaad oo shahaado haysta oo xirfad leh.
Ka dib markaad raacdo tillaabooyinkan, waxaad u socotaa inaad ka mid noqoto kalkaaliyaasha kalkaalisada dhimirka ee ugu mushaharka badan.
#1 Ku kasbashada Bachelor -ka Kalkaalisada
Tallaabada ugu horreysa ee lagu noqdo kalkaaliso kalkaaliso maskaxeed waa in lagu kasbado Bachelor of Science ee Kalkaalisada, ama shahaadada BSN.
Barnaamijku wuxuu u soo bandhigayaa dhakhaatiirta kalkaalisada maskaxda ee suurtagalka ah aqoonta anatomy iyo fiisigiska jirka aadanaha iyo xirfadaha kalkaalinta.
#2 Noqo Kalkaaliye Diiwaangashan RN
Tallaabada xigta ee noqoshada dhakhtarka kalkaalisada dhimirka waa inaad noqotid kalkaaliso diiwaangashan (RN).
Markaad dhammaystirtay shahaadada koowaad ee kalkaalinta caafimaadka ama shahaadada kalkaalisada, waxaad u qalantaa inaad ku sii waddo waddada xirfadda.
Waxaa muhiim ah in la cabbiro heerkan si loo sii barto dhaqammo caafimaad oo dheeraad ah.
#3 Khibrad Hel
Ka dib markaad noqoto kalkaaliso diiwaangashan, waxaa loo baahan yahay in la soo ururiyo waayo -aragnimo shaqo oo kalkaaliye ahaan ah. Waxaa ka sii muhiimsan, ka shaqee sidii aad ugu takhasusi lahayd caafimaadka maskaxda.
#4 Ku Qaado Shahaadada Masterka ee Kalkaalisada
Sidoo kale, ku sii wad shahaadada Master -ka ee kalkaalinta ama shahaadada Doctorate -ka ee kalkaalinta, marka aad marayso heerarkan waxbarasho waxaa ugu mudan in lagu takhasuso caafimaadka maskaxda.
#5 Hel Shahaadada
Ka dib markii aad soo martay adkeynta helitaanka shahaadooyin heer ka duwan, waxa xiga ee la sameynayo waa inaad shahaado ka hesho berrinka.
Imtixaanaadka guddiga shahaadaynta ee kalkaalisada dhimirka waxaa lagu qoraa shuruudaha kale ee u qalmidda si mid looga dhigo kalkaaliso kalkaaliye caafimaad oo la aqoonsan yahay.
Kuma filna in la helo shahaado laakiin waa in la sharciyeeyo, si loo helo ruqsadda wax -barashada waxaa jira shuruudo gaar ah oo arrintaas khuseeya.
madax: Waa Kuwee Kuwa Ugu Sarreeya Bixiyaasha Biyaha? | Dalalka ugu sarreeya 2022 -ka
GOBOLADA BIXINTA UGU SAREEYA FULIYEYAASHA NOOCYADA MASKAXDA
Gobollada badankood waxay ka mid yihiin kuwa ugu mushaharka badan kuwa kalkaaliyayaasha caafimaadka dhimirka. Waxaa jira arrimo badan oo go'aaminaya xaddiga la siinayo dhakhaatiirta kalkaalisada dhimirka ee gobol kasta.
Dawladaha mushaharka ugu sarreeya qaata kalkaaliyayaasha caafimaadka dhimirka waxaa ka mid ah:
Kaliforniya waxay ku jirtaa kaalinta ugu sareysa dawladaha ugu mushaharka badan kalkaaliyayaasha kalkaaliyayaasha dhimirka.
Celceliska mushaharka saacadlaha ah ee dhakhtarka kalkaaliyaha caafimaadka dhimirka waa $ 64.80, iyo celceliska mushaharka sanadlaha ah waa $ 133,780. Canshuurta dakhliga gobolka waa 1% - 13.3% halka qiimaha nolosha uu yahay 151.7%.
Kaliforniya, tirada kalkaaliyayaasha kalkaaliyayaasha shaqeeya waa 13,420.
Alaska ayaa kaalinta labaad ka gashay gobollada ugu mushaharka badan kalkaaliyayaasha kalkaaliyayaasha dhimirka.
Celceliska mushaharka saacadlaha ah ee dhakhtarka kalkaalisada dhimirka waa $ 59.08. Mushaharka celceliska sanadlaha ah waa $ 122,880.
Ma jiraan wax canshuur dakhli ah oo gobolka laga qaado, qiimaha noloshu waa 129.9%. Tirada kalkaaliyayaasha caafimaad ee shaqeeya waa 440.
Massachusetts waa tan saddexaad ee ka mid ah dawladaha ugu mushaharka badan kalkaaliyayaasha kalkaaliyaha maskaxda.
Celceliska mushaharka saacadlaha ah ee dhakhtarka kalkaalisada dhimirka waa $ 59.01. Mushaharka celceliska sanadlaha ah waa $ 122,740.
Canshuurta dakhliga gobolka waa sicir siman oo ah 5.05% halka qiimaha noloshu uu yahay 131.6%.
New Jersey waa gobolka afaraad ee ka mid ah dawladaha ugu mushaharka badan kalkaaliyayaasha kalkaaliyayaasha dhimirka.
Celceliska mushaharka saacadlaha ah ee dhakhtarka kalkaalisada dhimirka waa $ 58.70. Mushaharka celceliska sanadlaha ah waa $ 122,100.
Canshuurta dakhliga gobolka waa 1.4% - 10.75% halka qiimaha noloshu uu yahay 125.1%.
Sidoo kale akhri: Waa Kuwee Dukaameystayaasha Dahsoon Ee Lacagta Ugu Badan Bixiya? | 15 Shirkadood ee ugu Fiican 2022
New York waa gobolka shanaad ee ka mid ah dawladaha ugu mushaharka badan kalkaaliyayaasha kalkaaliyayaasha dhimirka.
Celceliska mushaharka saacadlaha ah ee dhakhtarka kalkaalisada dhimirka waa $ 58.16. Mushaharka celceliska sanadlaha ah waa $ 120,970.
Canshuurta dakhliga gobolka waa 1.4% - 10.75% halka qiimaha noloshu uu yahay 139.1%.
Hawaii waa gobolka lixaad oo ka mid ah dawladaha ugu mushaharka badan kalkaaliyayaasha kalkaaliyayaasha dhimirka.
Celceliska mushaharka saacadlaha ah ee dhakhtarka kalkaalisada dhimirka waa $ 57.96. Mushaharka celceliska sanadlaha ah waa $ 120,570.
Canshuurta dakhliga gobolka waa 1.4% ilaa 11% halka qiimaha noloshu uu yahay 192.9%.
Minnesota waa ka toddobaad ee ka mid ah dawladaha ugu mushaharka badan kalkaaliyayaasha kalkaaliyayaasha dhimirka.
Celceliska mushaharka saacadlaha ah ee dhakhtarka kalkaalisada dhimirka waa $ 57.29. Mushaharka celceliska sanadlaha ah waa $ 119,160.
Canshuurta dakhliga gobolka waa 5.35% ilaa 9.85% halka qiimaha noloshu uu yahay 101.6%.
8. Isku xirnaanta:
Connecticut waa gobolka siddeedaad oo ka mid ah dawladaha ugu mushaharka badan kalkaaliyayaasha kalkaaliyayaasha dhimirka.
Celceliska mushaharka saacadlaha ah ee dhakhtarka kalkaalisada dhimirka waa $ 56.74. Mushaharka celceliska sanadlaha ah waa $ 118,020.
Canshuurta dakhliga gobolka waa 3% ilaa 6.99% halka qiimaha noloshu uu yahay 127.7%.
Washington waa wuxuu galay kaalinta sagaalaad oo ka mid ah dawladaha ugu mushaharka badan kalkaaliyayaasha kalkaaliyayaasha dhimirka.
Celceliska mushaharka saacadlaha ah ee dhakhtarka kalkaalisada dhimirka waa $ 56.56. Mushaharka celceliska sanadlaha ah waa $ 117,650.
Ma jiraan wax canshuur dakhli ah oo gobolka laga qaado, qiimaha noloshu waa 110.7%.
Wyoming waa gobolka tobnaad oo ka mid ah dawladaha ugu mushaharka badan kalkaaliyayaasha kalkaaliyayaasha dhimirka.
Celceliska mushaharka saacadlaha ah ee dhakhtarka kalkaalisada dhimirka waa $ 55.78. Mushaharka celceliska sanadlaha ah waa $ 116,030.
Ma jiraan wax canshuur dakhli ah oo gobolka laga qaado, qiimaha noloshu waa 89.3%.
Gabagabadii, waxay ku habboon tahay inaad noqoto dhakhtar caafimaad.
Habka bixiyaha keli ah wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan xagga bixinta daryeelka caafimaadka maskaxda.
PMNP ahaan, tusaalaha bixiyaha keli ah ayaa la doorbidayaa maxaa yeelay wuxuu u roon yahay bukaanka iyo dhakhtarka labadaba. In kasta oo tusaalaha laga yaabo in waxyeello loo geysto dhowr jeer, guud ahaan, waa kan ugu fiican.
Bukaanku wuxuu awood u leeyahay inuu la sameeyo dhakhtar si uu ugu xidhnaado isku xidhnaan sidaas awgeedna u fududaynayo habka wadaagista macluumaadka. Tani waxay ka dhigaysaa ogaanshaha iyo dabagalka bukaanka mid aad ugu fudud dhakhtarka.
Dadka intooda badan ee raadinaya shaqooyinka waxay ka baqaan hay'adaha Temp iyagoo maanka ku haya inay dhammaantood yihiin khiyaamo.…